Author Topic: Su'aal: Gacmo dhidid? (Read 3831 times)
« on: July 14, 2012, 06:30:01 PM »
« Reply #1 on: November 03, 2012, 10:07:46 AM »
Waxa ugu badan oo kiciya waa diiqada, welwelka, dhaxdinta, fakarka iyo wixii niyadda kiciyaba.
Dhididka noocaan maahan cudur waa dhaxal waxaana ku bilawdaa yaraanta.
Dhididka badan ee caadiga ah waxaa caafimaad ahaan loo yaqaannaa "Hyperhidrosis", haddii calaacalaha aad ka dhidido waxaa loo yaqaanaa "Palmar Hyperhidrosis" kan cagahana "Plantar Hyperhisrosis".
Hababka daaweeynta dhidhidka xad dhaafka ah waxaa ka mid ah daawooyin dhidhidka yareeyo oo loo yaqaanno "antiperspirants" ama qalliin lagu joojiyo dhidhidka.
Wixii macluumaat intaa dheer kala xiriir takhtarkaaga.
Views: 6372 May 29, 2015, 01:03:58 AM
Su'aal: WaxAan qabaa dhidid saaid ah oo gacmaha iyo lugaha?
Started by ShireBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 1851 October 05, 2015, 11:24:40 AM
Su'aal: Waxaan isku arkay dhidid fara badan?
Started by Cabdisalaan2016Board Qaybta Su'aalaha
Views: 2482 April 04, 2016, 01:22:47 PM
Su'aal: Waxan kcbnaa dhidid frbdn lugaha iyo gacmaha?
Started by Maanqabojiye2018Board Qaybta Su'aalaha
Views: 1944 May 06, 2016, 10:01:12 PM
Su'aal: Heer kulka jirka oo sareeyo iyo dhidid badan?
Views: 2387 January 08, 2019, 08:07:25 PM